Xayiraadda haweenka sacuudiga ka saarneyd wadidda gawaarida oo soo afjarantay - BBC News Somali
Xayiraadda haweenka sacuudiga ka saarneyd wadidda gawaarida oo soo afjarantay
Image caption Haweenka Sacuudiga oo ku faraxsan wadidda gawaarida ee loo fasaxay
Haweenka sacuudiga ayaa loo oggolaaday tobaneeya sano kaddib iney Isteerinka gawaarida qabtaan iyada oo si rasmi ah looga qaaday xayiraadda wadidda gawaarida oo toboneeyo sano saarneyd.
Isbeddelkan oo lagu dhawaaqay bishi September ayaa waxaa dalka Sacuudiga leysanki ugu horreeyey oo ay qof dumar ah dalkaasi ka qaadato laga bixiyey horraanti bishan.
Sacuudiga waa waddanka keli ah oo uu ku haray sharciga ah iney dumarka gawaarida wadin oo qoysaska ku qasabayo iney had iyo jeer ay qortaan darawal u shaqeeya.
Hase ahaatee, tallaabbadan ayaa waxay ku soo beegantay xilli ay dowladda xabsiga dhigtay qaar ka mid ah haweenka u ololeynayey iney dumarka xaq u leeyihiin iney gawaarida gacantooda ku wataan.
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa waxay sheegtay ugu yaraan 8 ka mid ah dumarka xuquuqda haweenka u ololeeya ayaa xidhan iyaga oo weliba sugayo maxkamad in la soo taago oo ku eedeysan falal argagixiso xabsi dheerna ay dhici karto iney maxkamadda u dirto.
Haweenkaasina waxaa ugu caansan Loujian al-Hathloul, waa gabadh caan ku ah u ololeynta xuquuqda dumarka ee dalkaasi Sacuudiga.
Hay'adda xuquuda aadanaha caalamiga ah ayaa waxay Sacuudiga ugu baaqday iney isbeddallo la taaban karo ay ka sameeyso dhinaca xuuuqda haweenka oo ay dumarka ka xureyso ilaalada iyo waardiyaha ay ka hayaan ragga Sacuudiag.
Koox xuquuqda aadanaha u doodda oo ku sugan dalka Britain ayaa sanada badan u ololeyneysay dumarka in loo oggolaado iney gawaarida wadaan.
Tobannaan dumar oo gawaari waday ayaa 1990-kii lagu xidhay Riyadh iyaga oo qaar ka mid ah haweenka Sacuudiga oo gawaari wada ay muuqaallo ay iska soo duubeen ay 2008-di shaaciyeen iyo 2011-2014-ki.
Haddana waxaa la filayaa kumannaan dumar in waddooyinka lagu arko iyaga oo gawaarida gacantooda ku wata.
Dumarka Sacuudiga oo loo qaybiyay ruqsadda baabuur wadidda
Dumarka Sacuudiga oo loo ogolaanayo garoommada Ciyaaraha
"Haweeney kasta oo Sacuudi u dhalatay waxay u tahay maalin taariikhi ah", sida ay gabadh ka shaqeyso telefishiinka Sacuudiga oo la yidhahdo Sabika al-Dosari ay u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP.
Waxayna sheegtay iney isteerinka qabatay daqiiqada yar kaddib marki saqdi dhexe ee sabtida si kama dambeys ah loo qaaday xayiraadda dumarka mudda badan ka saarneyd iney gawaari wadaan.
Image caption Hanan Iskandar oo waaliddiinteeda dhunkaneyso iyada oo ku faraxsan marki loo oggolaaday wadiidda gaariga
Hannan Ismandar ayaa waaliddinteeda dhunkaneyso iyada oo ku faraxsan in marki ugu horreysay si sharci ah looga oggolaado iney Isteerin qabato iyada oo ku sugan Al Khobar.
"Maalmo badan oo aan saacado badan darawal sugeynay waa laga soo gudbay", waa gabadh dhigato cilmiga dawooyinka oo la yidhahdo Hatoun bin Dakhil oo 21 jir ah, "Hadda kaddib rag uma baahnin ayay hadalkeeda sii raacisay".